"အင်တာနက်အပြာစာပေစွဲခြင်း၏အာရုံကြောသိပ္ပံ - ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အသစ်ပြောင်းခြင်း" - Prause et al ။ , 2015 - သင့် ဦး နှောက်ပေါ်၌သင်၏ ဦး နှောက်
“ အင်တာနက်အပြာစာပေစွဲခြင်း၏အာရုံကြောသိပ္ပံ - ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်းနှင့်နောက်ဆုံးသတင်း” - ကောက်နှုတ်ချက် Prause et al ။ , 2015
မူရင်းစာရွက်နှင့်လင့်ခ် - “ အင်တာနက်ညစ်ညမ်းဆေးစွဲခြင်း၏အာရုံကြောသိပ္ပံ - ပြန်လည်ဆန်းစစ်ခြင်းနှင့်အသစ်ပြောင်းခြင်း” (2015)
။ : မြောက်မြားစွာကတခြားသက်တူရွယ်တူ-ပြန်လည်သုံးသပ်စာတမ်းများ Prause et al, 2015 အဆိုပါ porn စွဲမော်ဒယ်ကိုပံ့ပိုးသောသဘောတူ ၏ peer-ပြန်လည်သုံးသပ်ဝေဖန်မှု Prause et al။ , 2015
ကောက်နုတ်ချက်ဝေဖန်မှု Prause et al။ , 2015 (ကိုးကား 309)
အတူတူစာရေးဆရာသုံးခုနဲ့ပတ်သက်တဲ့နောက်ထပ် EEG လေ့လာမှုမကြာသေးမီကထုတ်ဝေခဲ့  ။ ကံမကောင်းစွာပဲ, ဒီလေ့လာမှုအသစ် [ကြိုတင်တစ်ဦးအဖြစ်အတူတူအတိုင်းအတာများကိစ္စများအများအပြားထဲကနေခံစားခဲ့ရ303] ။ ဥပမာ, တစ်ဦးပင်သောင်းပြောင်းထွေလာရောနှောဘာသာရပ်ရေကူးကန်သုံးသုတေသီရောဂါဗေဒအင်တာနက်ညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူများအတွက်အတည်ပြုကြပြီမဟုတ်, နှင့်ဘာသာရပ်များစွဲသို့မဟုတ်စိတ်ဓါတ်များမမှန်၏အခြားသရုပ်များအတွက်ပြမခံခဲ့ရကြောင်းစိစစ်မေးခွန်းအလုပ်။
အဆိုပါလေ့လာမှုအသစ်မှာတော့ Prause et al ။ သူတို့လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာနှင့်ကြားနေနှစ်ဦးစလုံးပုံရိပ်တွေကြည့်ရှုအားပေးအဖြစ် [ထိန်းချုပ်မှုများကြောင့်နှင့်အတူအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်း၏မကြာခဏကြည့်ရှု၏ EEG လှုပ်ရှားမှုနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါ309] ။ မျှော်လင့်ထားသည့်အတိုင်းလွှဲခွင်တိုးလာ: IPA ဘာသာရပ်များအဘို့အသေးငယ်ခဲ့ပေမယ့်, ကြားနေဓာတ်ပုံများကိုဖို့ LPP လွှဲခွင်ဆွေမျိုး, နှစ်ဦးစလုံးအုပ်စုများအတွက်တိုးတက်လာခဲ့သည်။ အင်တာနက်ကညစ်ညမ်း၏မကြာခဏကြည့်ရှုသူများအတွက်တစ်ဦးထက် သာ. ကြီးမြတ်သောလွှဲခွင်မျှော်လင့်ခြင်း, စာရေးဆရာများ "ဒီပုံစံပစ္စည်းဥစ္စာစွဲမော်ဒယ်များမှသည်ကွဲပြားခြားနားပုံပေါ်" ဖော်ပြခဲ့ပါသည်။
ကြားနေဓါတ်ပုံတွေကိုမှဆွေမျိုးစွဲတွေကိုတုန့်ပြန် သာ. ကြီးမြတ် ERP amplitude ပစ္စည်းဥစ္စာစွဲလေ့လာမှုများတွင်တွေ့မြင်နေလက်ရှိတွေ့ရှိချက် [မမျှော်လင့်ဘဲမရဖြစ်ပြီး, Kühnနှင့် Gallinat ၏တွေ့ရှိချက်များနှင့်အတူ aligns263], လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေတုံ့ပြန်လျော့နည်းဦးနှောက်ကို Activation ဆက်နွယ်နေကြောင်းပိုပြီးအသုံးပြုမှုကိုတွေ့သောသူ။ အဆိုပါဆွေးနွေးမှုအပိုင်းမှာတော့စာရေးသူKühnနှင့် Gallinat ကိုးကားနှင့်အောက်ပိုင်း LPP ပုံစံများအတွက်တရားဝင်ရှင်းပြချက်အဖြစ်လေ့ပူဇော်ကြ၏။ Kühnနှင့် Gallinat ကကမ်းလှမ်းတစ်ဦးကထပ်မံရှင်းပြသို့သော်ပြင်းထန်သောဆွ neuroplastic အပြောင်းအလဲများအတွက်ရလဒ်ကြစေခြင်းငှါဖြစ်ပါသည်။ အဆိုပါ dorsal striatum အတွက်အနိမ့်မီးခိုးရောင်ကိစ္စအသံအတိုးအကျယ်ဆက်နွယ်နေကြောင်းအထူးမြင့်မားသောညစ်ညမ်းအသုံးပြုမှု, လိင်စိတ်နိုးထနှင့်လှုံ့ဆော်မှုဆက်နွယ်နေတဲ့ဒေသ .
ဒါဟာ Prause et al ၏တွေ့ရှိချက်များကိုသတိပြုပါရန်အရေးကြီးပါတယ်။ သူတို့မျှော်လင့်ထားသည့်အရာ၏ဆန့်ကျင်ဘက်ဦးတည်ချက်ရှိကြ၏  ။ တဦးတည်းကအင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏ရောဂါဗေဒစားသုံးမှုမျှအကျိုးသက်ရောက်မှုရှိခဲ့မယ်ဆိုရင်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းခြင်းနှင့်ထိန်းချုပ်မှုများမကြာခဏကြည့်ရှုလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေမှအကျဉ်းထိတွေ့တုံ့ပြန်အလားတူ LPP amplitude ရှိသည်ဖို့မျှော်လင့်ထားပေလိမ့်မည်။ အဲဒီအစား, Prause et al များ၏မျှော်လင့်မထားတဲ့တွေ့ရှိချက်။  အင်တာနက်ညစ်ညမ်းအတွေ့အကြုံကိုလေ့၏မကြာခဏကြည့်ရှုနေဆဲပုံရိပ်တွေကိုမှအကြံပြုထားသည်။ တဦးတည်းယုတ္တိနည်းသည်းခံစိတ်ဤ Parallel ပေလိမ့်မည်။ မြန်နှုန်းမြင့်အင်တာနက်များ၏ယနေ့ကမ်ဘာပျေါတှငျ, ကအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းအသုံးပြုသူမကြာခဏစားသုံးသူနေဆဲမှဗီဒီယိုအပိုင်းများကိုဆန့်ကျင်အဖြစ်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ရှင်နှင့်ဗီဒီယိုများကိုကြည့်ရှုရန်ဖြစ်နိုင်ခြေအလွန်နည်းပါးသည်။ လိင်ရုပ်ရှင် [လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေထက်ပိုပြီးဇီဝကမ္မနှင့်ပုဂ္ဂလဒိဋ္ arousal ထုတ်လုပ်ရန်310] နှင့်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံရိပ်တွေမှလျော့နည်းအကျိုးစီးပွားနှင့်လိင်တုန့်ပြန်အတွက်လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာရုပ်ရှင်ရလဒ်များကိုကြည့်ရှု  ။ အဆိုပါ Prause et al ။ , အတူတကွခေါ်ဆောင်သွားနှင့်Kühnနှင့် Gallinat လေ့လာမှုများအင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏မကြာခဏကြည့်ရှုကျန်းမာထိန်းချုပ်မှုသို့မဟုတ်အလယ်အလတ် porn အသုံးပြုသူများနှိုင်းယှဉ်ဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုကျလာသောပိုမိုအမြင်အာရုံဆွလိုအပ်သောကျိုးကြောင်းဆီလျော်နိဂုံးချုပ်ဖို့ဦးဆောင်လမ်းပြ။
ထို့အပြင်ခုနှစ်, Prause et al ၏ထုတ်ပြန်ကြေညာချက်။ [309ကအစောပိုင်းကထုတ်ဝေသုတေသန overlooks ဘာဖြစ်လို့လဲဆိုတော့] "အဲဒီ VSS စည်းမျဉ်းပြဿနာများကိုသတင်းပို့ပုဂ္ဂိုလ်များ၏ပထမအလုပ်လုပ်တဲ့ဇီဝကမ္မဒေတာဖြစ်ကြောင်း" ကြောင်း [ပြဿနာဖြစ်ပါသည်262,263] ။ ထို့အပွငျကအင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းစွဲထဲမှာတွေကိုမှဦးနှောက်တုံ့ပြန်မှုအကဲဖြတ်အတွက်အဓိကစိန်ခေါ်မှုများများထဲမှလိင်ပိုင်းဆိုင်ရာလှုံ့ဆော်မှုကြည့်ရှုသည့်စွဲလမ်းအပြုအမူကြောင်းကြောင်း။ မှတ်သားဖို့အရေးကြီးသည် ဆနျ့ကငျြ, ကိုကင်းစွဲအပေါ် cue-reactivity ကိုလေ့လာမှုများမဟုတ်ဘဲဘာသာရပ်များအမှန်တကယ်ကိုကင်းသုံးစွဲတာထက်ကိုကင်းသုံးစွဲခြင်းနှင့်သက်ဆိုင်သည့်ဓါတ်ပုံတွေကို (ကမှန်ပေါ်တွင်အဖြူလိုင်း), ကိုအသုံးချရန်။ လိင်ပိုင်းဆိုင်ရာပုံများနှင့်ဗီဒီယိုများ၏ကြည့်ရှုသည့်စွဲလမ်းအပြုအမူဖြစ်ပါတယ်ကတည်းကအင်တာနက်ကညစ်ညမ်းသုံးစွဲသူများအနာဂတ်ဦးနှောက်ကို Activation လေ့လာမှုများရလဒ်များစမ်းသပ်ဒီဇိုင်းနှင့်အနက်နှစ်ဦးစလုံးအတွက်သတိထားယူရမည်ဖြစ်သည်။ ဥပမာအားဖြင့်, နေဆဲပုံရိပ်တွေကို Prause et al အသုံးပြုသောမှတစက္ကန့်ထိတွေ့မှုမှမတူဘဲ။  Voon et al ။ ပိုပြီးနီးနီးကပ်ကပ်အင်တာနက်ကိုညစ်ညမ်းလှုံ့ဆော်မှုကိုက်ညီဖို့သူတို့ရဲ့ cue reactivity ကိုပါရာဒိုင်းအတွက်အကဲဆတ်သော 9-ဒုတိယဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများကို ရွေးချယ်.  ။ ရန်နေဆဲပုံရိပ်တွေကို (Prause et al ။ [တစက္ကန့်ထိတွေ့မတူဘဲ309နေဆဲပုံရိပ်တွေကိုတစက္ကန့်ထိတွေ့မှုလုပ်ခဲ့တယ်ထက်]), 9-ဒုတိယဗီဒီယိုမှတ်တမ်းများထိတွေ့အင်တာနက်ညစ်ညမ်း၏လေးလံသောကြည့်ရှုအတွက် သာ. ကြီးမြတ်ဦးနှောက်ကို Activation evoked ။ ဒါဟာနောက်ထပ် [စာရေးသူဟာ Voon လေ့လာမှုအဖြစ်တစ်ချိန်တည်းမှာဖြန့်ချိခြင်း, Kühnနှင့် Gallinat လေ့လာမှုရည်ညွှန်းကြောင်းကိုရည်မှတ်နေသည်262] သေးသောသူတို့က Voon et al အသိအမှတျပွုခဲ့ပါဘူး။ ယင်း၏အရေးပါဆက်စပ်မှုရှိနေသော်လည်းဘယ်နေရာမှာမဆိုသူတို့ရဲ့စက္ကူအတွက်လေ့လာမှု။